अनलाइन कक्षा हाउगुजी मात्रै हो ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, ३१ बैशाख बुधबार ०९:१६
अनलाइन कक्षा हाउगुजी मात्रै हो ?
लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको घरमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन र कम्प्युटर छ, उनीहरूले जसोतसो अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । तर, जसको घरमा यस्तो सुविधा छैन, उनीहरूका लागि अनलाइन कक्षा हाउगुजी भएको छ । विज्ञहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । महामारीलगायतका संकट आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले डिजिटल सुविधा भएका विद्यालय आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
मंगलबार शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा, कोभिड–१९ पछि र बजेट अघि’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्थाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । साथै, जुन कुनै माध्यमबाट भए पनि विद्यार्थीलाई सिप र सिकाइ दिइराख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
PREVIOUS Previous post: भारतले बाटाे खनेको थाहै पाइनँ – प्रधानमन्त्री ओली
NEXT Next post: चीनको वुहानमा सबै बासिन्दाको परीक्षण गरिने !